Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Ciyaaraha Somaliland oo Direys Guddoonsisay koox kubadda Cagta Dhagoolayaasha Hargeysa
HomeAfricaAgaasimaha Guud ee Wasaaradda Ciyaaraha Somaliland oo Direys Guddoonsisay koox kubadda Cagta Dhagoolayaasha Hargeysa
11/02/2015 Cabdirisaaq Maxamuud Caalin
maamulka kooxda Dhagoolayaasha.
Hargeysa, Somaliland – Agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyaradda iyo ciyaaraha Somaliland Maxamed Xuseen Axmed (Dhabeeye) ayaa Direys dhamaystiran guddoonsiiyay kooxda kubadda cagta Dhagoolayaasha ee caasimadda Hargeysa.
Agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyaradda iyo ciyaaraha Somaliland Maxamed Xuseen Axmed (Dhabeeye)
Guddoonsiinta Direyskan uu ugu deeqay Agaasimaha guud ayaa ka qabsoontay xafiiska Agaasimaha waxaana ka soo qeyb-galay Agaasimaha waaxda ciyaaraha ee Wasaaradda Maxamed Nuux Jibriib, guddoomiyaha xidhiidhka kubadda cagta Somaliland Cabdilaahi Kheyre Cawaale (Gacal), guddoomiyaha garsoorka kubadda cagta Khadar Jiilaal, masuul ka socday wasaaradda Waxbarashada iyo maamulka kooxda Dhagoolayaasha.
guddoomiyaha xidhiidhka kubadda cagta Somaliland Cabdilaahi Kheyre Cawaale (Gacal)
Ujeedka guddoonsiinta Direyskan ayaa ku soo beegmaysa kulan maalinta Berrito garoonka kubadda cagta ee Hargeisa Stadium ku dhex-mari doona kooxda dhigooda ah ee Dhagoolayaasha magaaladda Borama. Guud ahaan masuuliyiintii ka qeyb-gashay guddoonsiintan ayaa si isku mid ah u boggaadiyey Agaasimaha guud sidoo kalena dhiiri-geliyay kooxda Dhagoolayaasha caasimadda.
Ugu dambeyntii tababaraha kooxda Dhagoolayaasha Hargeysa Caydaruus Maxamuud Maxamed ayaa uga mahad-naqay Agaasimaha guud Direyska uu ugu deeqay, waxaana uu xusay inay ciyaar qurux baddan soo ban-dhigi doonaan kulanka berito sidoo kalena ay rajaynayaan inay guushu raaci doonto.
W/D: Samatar Maxamed Cabdilaahi (Ugaaska)